अब कर्मचारी नभएर बजेट कार्यन्वयनमा समस्या हुँदैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अब कर्मचारी नभएर बजेट कार्यन्वयनमा समस्या हुँदैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ
तस्बिर : लोक गुरुङ
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारी नभएरै बजेट कार्यान्वयन रोकिने अवास्था अब नरहने बताएका छन। प्रदेश लोकसेवा आयोग सदनबाट पारित भैसकेकाले अब प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी करारमा भएपनि परिपुर्ति गरिने मुख्य मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रदेश निति तथा योजना आयोगले बुधबार गरेको प्रदेश सरकारको समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयगत प्रस्तुती दिने क्रममा सवै मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव मुख्य समास्या रहेको बताएका थिए । त्यसपछि जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले अब कर्मचारी समास्या नरहने स्पष्ट पारेका हुन् ।
समिक्षामा उठेको जग्गा प्राप्तिको समास्या यो बर्ष समाधान हुने समेत मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। गत आर्थिक बर्षमा प्रदेशले जग्गा प्राप्तिका लागि पठाएको कुनै प्रस्ताव संघ सरकारले स्वीकृत गरेको छैन । तर मुख्यमन्त्री गुरुङले अव प्रस्ताव पठाएको तीन महिनाभित्र भोगचलनको अधिकार प्राप्त गर्न सकिने जानकारी गराए।
तर उनले कार्यविधिको समास्या हटेको, कर्मचारी समास्या हल हुने र गत बर्षको अनुभवको आधारमा बजेट कार्यन्वयनको ९५ प्रतिशत लक्ष्यमा पुग्ने गरी लाग्न मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । गत बर्ष केही मन्त्रालयले समानुपातिक विकासको अवधारणामा ख्याल नपर्याएको भन्दै ती मन्त्रालायलाई सम्वन्धित क्षेत्रमा ध्यान दिन समेत निर्देशन दिए।